Xukun lagu riday Rag loo haysto in loo diyaariyay weerar ka fulinta Somaliland iyo DDS – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Xukun lagu riday Rag loo haysto in loo diyaariyay weerar ka fulinta Somaliland iyo DDS
Maxkamadda darajada koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida ayaa Maanta xukun ku ridau saddex Rag oo loo heysto inay ka tirsan yihiin Al-shabaab, kuwaasi oo lagu eedeeyay inay qorshaneynayeen weeraro ay ka fuliyaan Gobolada Waqooyi (Somaliland) iyo dhulka Soomaali Galbeed.
Ragga xukunka lagu riday ayaa lagu kala magacaabaa Usaama Cabdi-Nuur Saciid, Cabbdi-Samad Cabbdullaahi Maxamed iyo Sakariye Axmed Cabdullaahi, waxaana sanadkaan lagu soo weeriyay hogaanka baarista Hya’adda NISA.
Sedaxda dhalinyarada ah ayaa Loo daaray Muuqaal laga sameeyay Dhulka cagaaran Ee Soomaaliya, waxaana sidoo kale ay dhegeysteen Codad laga soo duubay dhalinyaro. U qaabilsanaha goballada Woqooyin ee Alshabaab ayaa u sheegay dhalinyarada inay Nolol wanaagsan ka jirto Howdka, waxa ayna Safar Socdaal ah ku soo mareen inta u dhexeyso Burco iyo Garowe.
Garowe oo ay diyaarad ka soo raaceen kadib waxaa laga soo dajiyay Muqdisho, haweenay magaceed Xarakigaha uu ahaa Wiillo ayaa dajisay Hotel, waxaana maalma kadib loo kaxeeyay Jilib, maalmo Nasiino ah kadib waxa ay uga sii gudbeen Bu’aale oo lagu baray tababar 90 Cisha ah Isticmaalka Qoryaha AK47-G3-BKM- F1 & PISTOL.
Sedaxdan dhalinyarada ahayaa sidoo kale lala soo qabtay Xasuus Qor ay wateen oo ay ku diiwaan gelin jireen Howl maalmeedkooda. Sidoo kale hay’adaha Amniga ayaa Xafiiska Xeer Ilaalinta la wadaagay Fariimo ay u direen Saaxiibbadooda gabdhaha ahaa, waxaana ay tiriyeen tixo Samir siin ah.
Maxkamadda Ciidamada ayaa sheegtay in raggaan ujeedkoodu uu ku koobnaa in ay billow u yihiin dhalinyaro loogu tala galay in ay ka howl-galaan Goballada Woqooyi iyo dhulka Soomaali Galbeed.
Maxkamadda darajada koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida ayaa fadhiya kala duwan kadib ku xukuntay raggaan min 8-sano oo Xabsi Ciidan ah , sida dhinacyada Dacwadda uu u sheegay Gaashaanle Maxamed Cabdi Muumin.
Dowladda Ruushka oo joojisay gaaska dabiiciga ah ee ay siin jirtay Finland iyo sababta
Dowladda Somalia oo shaacisay xilliga la qaadayo Imtixaanka shahaadiga ee Dugsiyada Sare